Omume Style nke ụmụ nwanyị Aquarius - Ụdị
Maka Aquarius niile Ọmarịcha ụmụ agbọghọ: Happy birthday! Maka na ekwere m na e nwere ụfọdụ zodiac webbing nke na-ebute myirịta, ana m achịkọta ndepụta ga-abụ ihe m chere na ị zoro n'ime akwa ma ọ bụ akwa gị. Ozi a na -abịa site n'ikike nke ịgụ kpakpando pro Susan Miller, onye biputere ụdị akụkọ dị egwu m nyochara (gbakwunyere, ọ bụ onye mara mma n'azụ vidiyo horoscope anyị dị ịtụnanya - chọpụta ha ma ọ bụrụ na i mebebeghị!). Ọ bụrụ na ị bụghị Aquarius, lee ihe ịrịba ama ndị ọzọ m dere banyere ebe a.
Ị maara na ị bụ onye Aquarius ma ọ bụrụ na n'ime ụlọ gị ...
1. Enwere ụfọdụ na -acha anụnụ anụnụ na -acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ odo odo na -acha odo odo. ___
Dị ka Miss Miller si kwuo , agba gị kacha mma bụ cobalt na fuchsia, ma ka ọ dị ugbu a, ị nwere ike ịnakọta iberibe ole na ole ị hụrụ n'anya.
2. Nkwupụta ọla na -aka nke ọma, iberibe dị mfe.
'Enwere ihe pụrụ iche gbasara nwanyị Aquarius, ọ na -adịkwa iche mgbe niile, na njedebe nke ihe ọhụrụ na ọkụ,' Susan dere , na mmetụta a na -emetụta uto gị na ọla. Ị bụghị nwa agbọghọ ahụ nwere eriri ọla edo dị gịrịgịrị ma ọ bụ mkpọtụ siri ike. Kama nke ahụ, olu olu mara mma na ihe na-ahụ maka m na mgbaaka mmanya na-ekwu na oghere dị na ngwa ngwa gị.
3. Ihe nwere njikọ teknụzụ.
Ihe ịrịba ama ahụ na-ahụkarị elektrọnikị, ma eleghị anya ị naghị eyiri uwe na-enyere Bluetooth aka, uwe a kwalitere na teknụzụ na-amasị gị. Bụrụ uwe mara mma ma ọ bụ togs mgbatị ahụ nke na -eme ka ajirija bụrụ akara fluorescent, nke a bụ ụdị ihe na -abụrụ obere akpa gị.
4. Ikiri ụkwụ abụghị ụdị akpụkpọ ụkwụ kacha ewu ewu.
n'elu ikpere akpụkpọ ụkwụ ejiji
Dị ka kpakpando si kwuo ( na Susan ), ị bụ onye na -enweghị nkọwa, ịkpọ asị n'ụdị, yana, dị ka nke a, imirikiti uwe gị na ngwa gị nwere ike ịdabere n'akụkụ nkịtị nke ụdịdị ahụ.
5. Ị na -enwe ike ịhụ ala.
Onye na -achị Aquarius bụ Uranus, ọ na -achịkwa ọgba aghara dị ka Susan si kwuo . Eleghị anya ị bụ ụdị mmadụ nke na -achọghị ịma ntakịrị ọgbaghara, ọbụlagodi na ọ bụrụ na onye si mba ọzọ ga -esiri ya ike ịchọta ihe, ị maara kpọmkwem ebe ihe di.
6. Ị nwere iberibe ihe ọ bụla adịghị ka ihe ọ bụla n'ime kọlụm ndị enyi gị.
Nnwere onwe na ebumpụta ụwa mara Aquarius, ma a bịa n'ịzụ ahịa, nke ahụ pụtara na ị na -achọ ịchụ nta wee zụta iberibe na -adịghị ka ihe ọ bụla ị hụburu.
7. Enwere ụfọdụ ihe ịchọ mma hippie ị nweghị ike ikewa.
Ndị na -ahụ maka mmiri na -enwekarị mmasị na kristal, ọ bụ ezie na ị nwere ike ghara ịzụ ahịa ha, ikekwe ị nwere mmasị na olu olu na ọla ntị kristal mara mma nke ukwuu na ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Ndị enyi ndị ọzọ ewepụla ha n'ime igbe ọla, mana ịnweghị ike ịnagide ha.
__Ya mere, ndị enyi Aquarius: Nke a ọ dị ka gị?
ndị nduzi mbido gbasara ike gbasara ike
PS: Hụ uwe ahụ n'anya? Ọ dị site n'aka ndị mmadụ efu, ị nwere ike ịzụ ya Ebe a .
ọnụ mwepụ ntutu laser maka ihu
ụmụ nwanyị t -shirt ojii dị larịị
bra bra egwuregwu kacha mma maka obere ara
ọnụahịa mwepụ ntutu laser dị m nso
otu esi eyi flannel